Jesosy dia tsy izao tontolo izao ny Avengers - Christer Åberg | Apg29
761 online! | Sidvisningar idag: 5 084 | Igår: 149 115 |
Jesosy dia tsy izao tontolo izao ny Avengers - Christer Åberg
Christer Åberg nanazava fa i Jesosy dia tsy ta-hamaly ratsy, tsy hitsara na hanasaziana - mamonjy sy mamonjy satria tia anao!
Ny tsy ilaina - Part 18
Ny faha-18 ampahany ny serial momba ny fahazazako. Efa tonga any amin'ny lise aho rehefa nanomboka tamin'ny kilasy fahafito. Ity no ampahany gaga anao, izay nataony ho aho, rehefa mahita nitranga.
Fifindra-monina Board nanontany ny ratsy fanontaniana mba hamantarana raha Kristianina ianao
Ny ankamaroan'ny Fikisahana ny 12 Board fanontaniana dia tsy azo heverina mihitsy ny mamaly, ary koa mahomby tanteraka raha tena ilaina ihany ny olana, mba hahitana raha misy olona no Kristianina na tsia.
New Age paves ny lalana ho amin'ny Antikristy
By Holger Nilsson Tamin'ny taona 1980, dia manana bebe kokoa ho tonga manerana ny teny hoe "New Age". Na izany aza izany, na izany aza, maro no gaga noho ny zavatra ny New Age no zavatra, na dia eo aza ny zava-misy fa olona an-tapitrisany eran-tany no nanohina, fiantraikany ary mandray anjara ao amin'io fironana ankehitriny mamafa hatrany. Ohatra, amin'ny faran'ny taona 1986-87, Taom-baovao i Eva, dia ny olona an-tapitrisany izay niditra tao fisaintsainana, azon-tsindrimandry sy ny fombafomba asa. Tsy kisendrasendra izany fa io zava-nitranga fa dia mirindra ezaka ny New Age ny olona eran-tany.
Moa ve ny olona iray izay niova firaisana ara-nofo any an-danitra?
Ho any an-danitra ny olona izay niova firaisana ara-nofo amin'ny alalan'ny fandidiana?
Mpamaky Mail nataon'i David Billström I Jesosy no modely voalohany indrindra mba hanampy ny olona izay tsy mpino. I Jesosy, rehefa nandeha tany izy, dia nahalala izay tao mitranga ao amin'ny olona izay tonga teo aminy. Izy no tsy miova anio.
A voahombo tamin'ny hazo fijaliana teo amin'ny Isiraely McJesus mozea
Hetsi-panoherana teo amin'ny Isiraely hiady Jani Leinonen "zavakanto" McJesus mampiseho ny nohomboana tamin'ny hazo fijaliana Ronald McDonald.
Ny undesired - Part 17
Ary mbola hitoerako eto ny horohorontany sy ankasitrahana serial hatramin'ny mbola kely. Ny tantara dia hitombo ka ho tonga mafy kokoa aza mampivarahontsana. Ny sasany tena mahafinaritra sy mahaliana fizarana hoavy izao.
A fahanginana Jesosy - Ilay lehilahy izay namono ny feon'ny - Part 6
Hans Jansson, Uppsala Heroda Antipasy hitsena antsika ao amin'ny Baiboly indray tantara. Tamin'ity indray mitoraka ity dia mitsangana eo anatrehan'i Jesosy. Ary tamin'izany dia efa telo taona hatramin'ny Jaona Mpanao batisa ny fanapahan-doha.
Ratsy lisitra - Ny lehilahy izay namono ny feon'ny - Part 5
By Hans Jansson , Uppsala Misy zavatra "nahira-tsaina" sy ny ratsy Heroda ny zavatra ao anatin'ny nanazava isika. Izany no mitondra ahy izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Genesisy.
Any amin'ny afobe, fadiranovana ny mpanota
Raha any amin'ny helo, dia mijaly loatra. Izany no fiainan-tsi-ho. Tahaka ny lehilahy manan-karena ao amin'ny Lioka 16, ianao hampijalina amin'ny afo. Ny mpanota rehetra any amin'ny helo, dia any mba hampijalina.
Zaza vao teraka dia efa an 'taloha'
Sary: Pikantsary avy amin'ny Facebook.
Mponina ao New York City izao dia afaka manova ny lahy sy ny vavy tsy misy fanamarinana ara-pitsaboana. Ankoatra izany, dia afaka manova ny vao teraka mihitsy aza ny lahy sy ny vavy.
Raha ianao no teraka tao amin'ny vatana tsy mety, dia afaka hateraka indray
Louise Nelum Sanda Mali "Loui" Sand, 26, dia soedoà Handball kintana Ankehitriny dia mijanona milalao Handball mba hisy ny fanadihadiana ho an'ny lahy sy ny vavy dysphoria.
Christian Bale: Misaotra Satana fitaomam-panahy
Sary: Avy TV4.
Vidiny ho an'ny mpilalao sarimihetsika tsara indrindra nandeha tany mpilalao sarimihetsika Christian Bale ao amin'ny sarimihetsika lefitra, izay Nisaotra ny fitaomam-panahy: i Satana.
America News momba ny Soeda: hanisy fitaovana elektronika bitika napetraka ho an'ny fitantanana vola tany Soeda
Ao Stockholm, Soeda, 1000 mifidy ny hifidy Shop amin'ny kely Microsystems. Poti napetraka eo ambany hoditra.
Misy ifandraisany amin'ny finoana silamo
Mpamaky Mail amin'ny Stefan Eliasson Tamin'izany fomba izany no manamarina izany ny asa. Louisa sy Maren tsy manam-paharoa, vao haingana nahita ny fasana faobe amin'ny 34 hanapaka ny lohan'i Kristianina tany Libya.
Vecka 04, onsdag 23 januari 2019 kl. 00:29
Antikristy fanaraha-maso ao Shina
By Holger Nilsson Misy ankehitriny ny zava-misy any Shina no mety indrindra dia tsy mampiditra - dia rafitra fanaraha-maso izay mety tsy misy olona efa afaka sary an-tsaina.
Famonjena ahy - Christer Åberg
Ary rehefa nentiny, dia nitsangana ka niresaka tamin'ny iray amin'ireo mpitarika ao amin'ny Fiangonana Pentekotista teo amin'ny fidirana atao hoe Donald. Avy eo izy dia nanontany hoe: "Moa ve ianao te-ho voavonjy?" Na dia tsy fantatro izay hevitry ny teny ho an'ny zavatra hoy aho ...
Te-nanjanaka Mars nefa tsy nandeha tany ny volana
Tesla herinaratra fiara orinasa mpamorona sy CEO Elon Musk dia mikasa ny handefa olona any Mars sy ny nofy ny nanjana ny planeta.
Lehilahy miray amin'ny lehilahy sy ny mitovy taovam-pananahana ny fifandraisana - Stefan Gustavsson
Inona no lazain'ny Baiboly momba ny firaisan'ny samy lehilahy hoe? Ara-baiboly sy ny soratra misaina tohan-kevitra dia nanazava tamin'ny fomba tena fototra lalana, tamin'ny fomba tena tsara lahateny nataon'i Stefan Gustavsson.
Tsy mandalo tokantrano maso, tsy mbola nisy, ary tsy ho fanambadiana
Mba zatra ny mpiara-miasa hoy manana firaisana amin'izy samy izy, fa mitovy zavatra izay manambady amin'izy samy izy. Saingy tsy mifanaraka amin'ny Baiboly.
Fantatrao ve fa ny Baiboly dia miresaka betsaka momba ny biby? Efa nataoko lisitra lava be ny biby maro ao amin'ny Baiboly ary ny sasany amin'ny andinin-bibikely! Please mankafy!
Of Sigvard Sabatra Raha ny manantena soratra ara-paminaniana io, dia nataony fanoharan'i Jesosy momba "ny very / återvunne zanany" (Lioka 15) toy ny tandindon-javatra fototra, ny afterimage tamin'ny taonjato teo aloha-zava-nitranga taloha.
Tsy ara-dalàna mba hampisehoana fa notapahin-doha ny vehivavy Silamo
Tsy ara-dalàna hampiseho ny marina ho any amin'ny vehivavy roa mpizaha tany any Maraoka notapahin-doha ny silamo.
Ity no iray blonde notapahin-doha ny vehivavy Silamo
Tanora roa avy any Skandinavia vehivavy blonde notapahin-doha ny silamo rehefa nitoby tao Maraoka. Izany miantso ny famonoana vehivavy, asa fampihorohoroana, izay mazava ho azy izany, fa teny marina kokoa dia fa finoana silamo ny famonoana olona noho ny antony aingam-panahy avy amin'ny CORAN.
Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 464 925 524 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 131 bloggartiklar, 93 342 kommentarer och 61 360 bönämnen.